gaabinta : MGIMO
aasaasay : 1944
Ha iloobin in aad wada hadlaan Moscow State Institute of International Relations
Qor at Moscow State Institute of International Relations
MGIMO waa hay'ad Russia ee ugu qiimaha waxbarasho ee dhallinyarada danaha caalamiga ah. Ardayda caalamiga ah, MGIMO waa in oo dheeraad ah: casri ah, soo dhawayn, iyo mid maskaxeed oo kobcinaya meel wax ka barato magaalada ugu weyn Russia ee.
MGIMO ee ardayda ah ee kala duwan 6,000 waxaa laga madaxda sare ee ardayda Ruush iyo jaamacadaha lammaane oo adduunka ah. MGIMO bixisaa kala duwan oo balaaran oo koorasyo ​​heerar undergraduate iyo qalin - ka arimaha caalamiga ah, cilmiga siyaasadda, dhaqaalaha, iyo sharciga caalamiga ah, in saxaafadda, maamulka ganacsiga, iyo siyaasadda tamarta. undergraduate International codsan kartaa B.A si buuxda u English-baray. barnaamijka ama ka koorsooyin adag oo xiiso leh ee Ruush dooran. Ardayda doonaya shahaado Master ah ka codsan kartaa mid ka mid ah barnaamijyada double-degree groundbreaking MGIMO ee, ku bixiyeen in la kaashanaya hay'adaha caalamiga ah, ama doondoono meel ka mid ah in ka badan soddon barnaamijyada MA baray Ruush.
Waayo, taariikhda oo dhan, MGIMO sii laftiisa remake. In shantii sano ee la soo dhaafay, Jaamacada ayaa sameeyay iskaashiga badan oo cusub oo hay'adaha keentay adduunka oo dhan. MGIMO si buuxda loo biiriyo waafaqsan Bologna, higaada baxay mustawe aad u adag hay'adaha ka sareeya Yurub waxbarashada. Jaamacadda ayaa sidoo kale ka go'an in ay korinta jidhka ah arday abid-kordhaysa, manhajka, in ay sii socoto si ay u muujiyaan in ay sumcad sida meesha ugu qiimaha iyo ugu horumarsan Russia ee fahamka arrimaha caalamiga ah iyo nolosha campus.
Ruushka PREMIER UNIVERSITY
MGIMO waa wanaagsan ee loo yaqaan iyo culuumta ugu qiimaha hay'ad Russia ee. Waa heer caalami ah ee dareenka kasta oo dheer – heer sare caan, madax-bannaan, labada jinsi dhigtaan, iyo muuqba ka fadilnaa. MGIMO ayaa todobo dugsiyada iyo afar machadyada waxbarasho koobi waaxaha tacliimeed badan, qaybahoodii, iyo barnaamijyada abaalmarinta, iyo sidoo kale xarumaha maadooyinka iyo barnaamijyada shaqada sayniska kordhin ka baxsan xuduudaha dhaqanka waaxeedyada.
Sida runta ah CAALAMIGA AH
jaamacadda caalamiga ah ugu Russia ee, MGIMO ayaa guri Ruush ee ardayda ka soo adduunka oo ku dhawaad 60 sano, bixinta badan 5,000 caalamiga ah qalin waxbarashada magooliyey sida madaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha adduunka. Intaa waxaa dheer, MGIMO xiriir dhow la leh xarumaha waxbarashada ugu fiican adduunka ee, Yurub, Aasiya, Ameerika, iyo Africa. MGIMO faantaa on diirada caalami ah iyo MGIMO waa guri ee ardayda caalamiga ah.
University MGIMO ahaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya Ruush inuu ku biiro Ururka Jaamacadaha Yurub, iyo wax ka saxiixdey ayaa si waafaqsan Bologna. falsafada MGIMO waxay bixisaa kharashka waxbarashada ee barnaamijyada Bachelor degree iyo Master kuwaas oo loo aqoonsan yahay adduunka oo dhan, ardayda helo aqoon oo waa furaha shaqo iyo waxbarasho ee fursadaha caalamiga ah. MGIMO sharafeedka Doctorates ayaa la siiyey on Gaalowday oo caalami ah.
XULASHADA KOORSADA ballaaran
University MGIMO bixisaa id kala duwan ubalaadhan barnaamijyo waxbarasho iyo takhasuso la heli karo in jaamacad ee ay nooca meel kasta. Marka ay timaado in la siinayo ardayda Xaallada fahamka dunida casriga ah - waxaa laga dhex diblomaasiyadda caalamiga ah, maamulka dadweynaha, ganacsi, dhaqaalaha, sharciga, iyo saxaafadda, in aan ku xuso ka 53 luqadood waxaa bara - MGIMO waa mid gaar ah.
Fiican TACLIINTA ACCESS
University MGIMO isu keentaa dhinacyada ugu fiican ee kuliyad fanka deeqsi ah kuwa jaamacad cilmi waaweyn. Habkan ardayda helaan dhow waxay bixisaa in ka badan 1200 Professor iyo xubnaha macalimiinta, lugu daro 20 xubnaha buuxa iyo xubnaha dhigma of Ruush Academy of Sciences caanka, dheeraad ah 113 dhakhaatiirta ee sayniska iyo 400 doctorate ah musharaxiinta sayniska. jaamacadaha MGIMO kibirkiisu qaadataa in ardayda.
WORLD CILMI caan
Iyada oo sumcad fiican iyo xaaladda waxbarasho ee MGIMO joogto kaalinta sare ee ratings jaamacad. Its cilmi waa mid caalami ah u kordhiyay iyada oo loo marayo iskaashi la machadyada cilmi-baarista taasoo keentay in Russia, wadamada CIS, iyo adduunka oo dhan.Under dalladda ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, MGIMO waa siyaasad turxaan bixinta mufakiriinta iyo forum for dood iyo falanqayn ka mid ah horumarinta caalamiga ah iyo arrimaha hadda, oo gacan ka ay baritaan caalami ah sare u doonatay.
Tan iyo aragtida ay MGIMO la aasaasay iyo falsafada ayaa ku biireen qaxri jireen tacliinta dhaqanka la-abuurnimo caqliga. Barnaamijka Waxbarashada Cusub jaamacadda ee, dhaqan in ka badan 2007-2008, cusboonaaday ay diiradda ku saabsan waxbarashada aqoonta ku salaysan. Barnaamijku wuxuu kaloo arkay MGIMO la dhiso nidaam tayo cusub oo muujineysa isbeddellada sayniska iyo waxbarashada casriga ah, la dhaqanka maamul cusub iyo farsamooyinka, oo soo jiitay madaxda waxbarashada ee caalamiga ah.
tacliin heer sare
Jaamacadda waxay caan ku tahay tacliin heer sare, taasoo la micno ah ugu ifka hogaamiyayaasha mustaqbalka Russia ayaa waxaa haatan daraaseynaysa, iyadoo tiro sii kordhaysa oo dhigooda caalamiga ah. Sannad kasta qalin-jabisa dugsiyada sare ugu wanaagsan Russia ee tartamaan ku dhawaad ​​kun meelo cusub, iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyada – gaar ahaan dhaqaalaha, sharciga, iyo xiriirka caalamiga ah – isagoo ilaa 30 codsadayaasha meel kasta.
qalin MGIMO ka mid ah Madaxweynayaasha, ra'iisul wasaare, iyo wasiirada arimaha dibada ee Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Mongolia, Slovakia, Ukraine iyo dalalka kale.
Networking dunida oo dhan
MGIMO bixisaa ma aha oo kaliya waxbarashada sare, laakiin fursad qabanin in ay helaan xiriirada xirfadeed oo adkaysan doonaa si fiican ka baxsan waxbarashada tooska ah. Its qaab waxbarasho oo adag oo adag dhammaystirayaa jawi caafimaad leh bulshada halkaas oo bulshada ardayga iyo Qalinjabiyeyaasha yihiin kuwo aad u heli karo iyo soo dhoweyn ardayda ajinebiga. In deegaanka this ardayda maanta noqon kartaa Sokeeyaha berri ee caalamiga ah ee siyaasadeed, sharci, ganacsiga iyo bulshada hoggaamiyeyaasha.
NOLOSHA BULSHADA GREAT
Beyond waxbarasho, ardayda MGIMO helayo isu qeybin doonaa si riwaayada badan, qoob, habeen comedy, iyo dhacdooyinka isboorti kasta bilabo. ururada kala duwan ee ardayga buuxin kalandarka la dhacdooyinka bulshada dheeraad ah. Dabcan, MGIMO waa in Moscow, mid ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee dunida, la soo diyaariyeen ah ee khasnadihii dhaqan iyo taariikheed, dhaqanka firfircoon oo cawayska sitaa. Waxa kale oo ay bixisaa si sahlan u kala duwanaanta iyo tamarta ee casriga ah Russia helaan, iyo dhaxalka dhaqanka Tacaddi. MGIMO waa waayo-aragnimo ah nolosha cajiib ah loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
School of Relations Dhaqaalaha International
School of Science Siyaasadda
School of Business International iyo Maamulka Ganacsiga
School of Applied Dhaqaalaha iyo Ganacsiga
Machadka Caalamiga ah ee Siyaasadda Energy iyo Diblomaasiyadda
Machadka Caalamiga ah ee Maamulka
Machadka Daraasaadka Yurub
School of Dowladda iyo International Affairs
MGIMO, taas oo, in Ruush, waxay u taagan tahay Moscow State Institute of International Relations, waxaa la aasaasay on October 14, 1944 marka Golaha USSR ee Commissars Dadka habayn School dhawaan abuuray ee Xiriirka Caalamiga ah ee State Moscow Jaamacadda galay machad madax bannaan. Markii hore loo yaqaan Institute of International Relations (IMO) ugu horeysay 200 ardayda ahaayeen halyeeyada kuwaas oo ka badbaaday soo gaareen dagaalkii labaad ee adduunka oo ayaa lagu go'aamiyay in la dhiso nabad iyo xasilooni caalamiga ah.
Bilowgiiba MGIMO waxaa loogu tala galay in ay noqdaan cilmi-baarista iyo waxbarashada xarun waxbarasho oo gaar ah. Waxaa si deg deg ah u noqday machadka tababarka diblomaasiyadeed hoggaamineed Russia ee, iyo tacliin MGIMO samaynta kaalin weyn guud ahaan beerihii xiriirka caalamiga ah, dalka iyo gobolka waxbarashada, sharciga caalamiga ah iyo xidhiidhka caalamiga ah ee dhaqaalaha. Intaa waxaa dheer, way qabsadeen meel safka hore ee dadaalka cilmiyaysan, iyadoo samaynta dugsiyada sayniska caan dhowr dunida, iyo sida goobta shaqada ee badan aqoonyahaniinta Ruush fiican, oo ay ku jiraan Academy of Sciences xubnaha E.Tarle, L.Ivanov, V.Trukhanovskiy, S.Tikhvinskiy, N.Inozemtsev, iyo Y.Frantsev.
Asal ahaan MGIMO ka kooban saddex dugsi: School of International Relations, School of Relations Dhaqaalaha International iyo School of Law International. ardayda International bilaabay soo socda inuu ka MGIMO ka 1946. Tan iyo markaas Qalinjabiyeyaasha MGIMO u noqday ganacsi qaran, Hoggaamiyayaasha diblomaasiyadeed iyo sharci dalal badan, dhowr noqday Wasiirrada Arrimaha Dibadda, madaxdii dowladda, iyo xataa Madaxweynayaasha.
In 1954 Machadka Moscow ee Daraasaadka Oriental, mid ka mid ah machadyada Ruush ugu da'da weyn oo bedelka to School Lasarevsky abuuray 1815, waxaa lagu daray MGIMO. Maktabadda Institute ayaa si weyn u hodan by dheer ee maktabada caanka Lasarevskaya, oo faca ma ay jidhka badan oo suugaanta bariga.
In 1958 MGIMO daro ah Institute of Arrimaha Dibedda, Ganacsiga, kaas oo markii hore ku shaqeeya ay marti-gelisay ee Wasaaradda USSR ee Arrimaha Dibedda, Ganacsiga. Tani waxay keentay in la ballaariyo ah oo ka mid ah School of Relations Dhaqaalaha International oo diiradda la on tababarka ganacsiga shisheeye iyo takhasusay dhaqaalaha. In 1969 Journalism Dugsiga Caalamiga ah waxaa la aasaasay.
In 1980 iyo 1990-, isbedelka qoto dheer bulshada iyo dhaqaalaha nadiifinta Russia arkay isbedel weyn oo qaab-dhismeedka iyo waxbarashada barnaamijyada MGIMO ee. In 1991 Dugsiga cusub ee Business International iyo Maamulka Business la aasaasay.
Tan iyo markii ay 1992 Machadka ayaa madax ka Raktarka, Professor Anatoly Torkunov, oo hoggaanka ayaa qeyb muhim ah ka adkaadaa buuqooda of 1990. Under mudadii MGIMO ayaa bilawday barnaamij ballaaran ee casriyeynta waxbarashada iyo hal-abuurka, ay ka mid yihiin is-dhexgalka dhow la waxbarasho sare Yurub, dhex galo habka Bologna ah, ballaariyo ee xiriirada caalamiga ah, iyo sare u qaadis ah ee Institute in ay safka hore ee waxbarashada ee caalamiga ah iyo sayniska.
In 1994 MGIMO la siiyey xaaladda University. sano ayaa isku arkay abuurista Machadka Caalamiga ah ee Maamulka, ka dib markii go'aan ay dowladda Ruush on maamulka iyo tababarka maamulka degmada. 1998 arkay aasaasay oo ka mid ah School of Science Siyaasadda, hore ee ay nooca in Russia in ay diiradda saaraan tababarka maamulayaasha adeegga dadweynaha.
In 2000 Machadka Caalamiga ah ee Siyaasadda Energy iyo diblomaasiyad la aasaasay, ay marti-gelisay ee MGIMO, on hindisaha shirkadaha hoggaamineed tamarta Ruushka. Hadafka Machadka uu yahay si ay u tababaraan maamulayaasha waayo, waxay u dallici iskaashiga tamarta ee caalamiga ah.
Machadka Waxbarashada Yurub MGIMO ayaa waxaa la aasaasay bishii 2006, oo muujineysa dadaalka wadajirka ah by Ruushka iyo Midowga Yurub in uu abaabulo barnaamijyada waxbarashada sii mas'uuliyiinta Ruushka iyo Yurub.
2011 ayaa arkay aasaasay dugsiga yaraa MGIMO ee, Dugsiga of Applied Dhaqaalaha iyo Ganacsiga. Waa gaar ah barnaamijka BA ay Ecology iyo Duur-joogta Management, taasoo horumarisa khibrad duurka ku ah arrimaha dhaqaalaha iyo dhawrista.
Sannad kasta MGIMO aqbalo in ka badan hal kun oo arday cusub, ka qayb kasta oo ka mid ah Ruushka, iyo caalamkaba ka badan 60 dalalka. In ka badan 35 kun Qalinjabiyeyaasha Ruush iyo caalamka waa inay sharaf u qalin Moscow State Institute of International Relations. Qaybaha Association MGIMO Alumni waa firfircoon ee dalal badan oo adduunka ah. In 2007, MGIMO Alumni Association dhisay Russia ee hibeynta jaamacadda marka hore - Foundation Horumarinta ee MGIMO.
Ma rabtaa wada hadlaan Moscow State Institute of International Relations ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Moscow State Institute of International Relations rasmiga ah Facebook
Moscow State Institute of dib u eegista Xiriirka Caalamiga
Ku biir si ay ugala hadlaan of Moscow State Institute of International Relations.
Kazan University Technical State magacaabay ka dib markii A. N. Tupolev Kazan
Herzen State koriska University of Russia Saint Petersburg
Far Eastern University Federaalka Vladivostok